कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा शरीरमा के–कस्ता परिवर्तन आउँछन् ? | कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा शरीरमा के–कस्ता परिवर्तन आउँछन् ? – हिपमत
कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा शरीरमा के–कस्ता परिवर्तन आउँछन् ?
कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग डाक्टरको लडाईं कुनै अपरिचित दुश्मनविरुद्ध खेलिएको युद्धसरह हो ।यसले तपाईंको शरीरमा कसरी हमला गर्छ ? संक्रमणपछि मानव शरीरमा कस्ता लक्षण देखिन्छन् ?कस्ता व्यक्ति गम्भीर रुपमा बिरामी हुने वा कस्ता व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ ? र तपाईंले यसको उपचार कसरी गर्ने ?चीनको ऊहान शहरका अस्पतालमा यो महामारीको उपचार गराइरहेका डाक्टरको समूहले अब यी प्रश्नको जवाफ दिन सुरु गरेका छन् ।
१ सय ३८ बिरामीमध्ये ६ जनाको मृत्यु भएको छ । यसले ४.३ प्रतिशत मृत्युदर देखाउँछ । यद्यपि, संक्रमण सुरुवाती अवस्थामा भएकोले यो दरमा परिवर्तन हुनसक्ने पनि बताइएको छ ।
अन्य लक्षण थिए..